🥇 ▷ MUJO - App of the Week on iTunes ✅
MUJO – App of the Week on iTunes
Kooxda App Store waxay siinayaan ciyaarta MUJO muddo toddobaad ah
Apple aad dooratay sida barnaamijka Toddobaadka ee “Store Store” ee ciyaarta Store puJ MUJO ee loogu talagalay iPhone iyo iPad. Ciyaartan, oo bilaash ah muddo toddobaad ah, waxaad u baahan doontaa inaad adeegsato dhammaan xariifnimadaada iyo karti-maskaxeedkaaga si aad u xalliso xujooyinka aad ka dhex heli doonto heer kasta si aad u disho daanyeerrada soo muuqan doona. Faahfaahin dheeri ah ka hel kulankaan oo soo degso hoos.
Waa maxay ciyaarta hal abuurka ah, MUJO ee loogu talagalay iPhone iyo iPad?
MUJO loogu talagalay iPhone, iPad iyo iPod taabashada, waxaa laga heli karaa App Store, waa ciyaar halxiraala ah oo leh astaamo u gaar ah oo ciyaaruhu aysan laheyn. MUJO-da waa inaad soo aruurisaa tiro badan oo talefan oo dhaqso u tirtir si aad u weerarto daanyeerrada aad ka heli doonto jidkaaga.
Sidookale, kani waa ciyaar aan waligiis dhamaan. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad kula qaadan karto markasta iyo dhamaan qalabkaaga macruufka, si aad ugu raaxeysan karto intaad rabto iyo markasta oo aad rabto.
Si aad u ciyaarto waa inaad si fudud iskaga dhejiso tiirarka seefta safka in kabadan seddex ka dibna looxyada. Xusuusnow in sida ugu badan ee aad isugu xoojiso weerarkaaga si aad ah loo kordhin doono. Markaad dhigeyso wax ka badan seddex seefood oo aad Touchez iyaga ka dhigto, waad daciifin kartaa daanyeerrada ay tahay inaad baabi’iso. Guuldaro dhammaan daanyeerka ee khuraafaadka Griiga ee ka dhex muuqan doona ciyaarta oo dhan.
Sidoo kale waad ka yeeli kartaa ilaahyada isbahaysigaaga. Laga soo bilaabo kuwa jeweersada ah, ilaahyada taariikhiga ah ee Giriiggu waxay ka soo muuqan doonaan waqti ka waqti, kuwaas oo noqon doona xulafadaada oo aad sii wado inaad ku guuleysato la-dagaallanka bahallada, waxaad sii wadi kartaa inaad ka faa’iideysato awoodooda oo dhan.
Astaamaha ciyaarta MUJO ee aaladaha ‘iOS’
Ciyaartan waxaad ku raaxeysan kartaa astaamaha soo socda:
Qaab fudud oo lagu ciyaaro laakiin leh waxyaabo badan.
Waxaad ku raaxeysan kartaa nidaamka halxiraalaha ah ee waligiis aadan weligaa soo marin.
Ku ciyaar ilaahyo badan iyo bahal weyn oo ku saleysan naqshadda HEY.
Naqshadeynta sawirka iyo sawirada quruxda badan iyo waliba mid aad u fudud
U soo dejiso MUJO iPhone iyo iPad
Hadaadan wali haysan ciyaarta xumaa ee qalabka macruufka, waxaad ku rakibi kartaa adiga oo maraya xiriirinta tooska ah ee soo dejinta, kana socota App Store, oo aad ka heli doontid hoosta.
(rafcaan qaadashada 882416288)
DUMAR wuxuu ku jiraa App Store, wuxuu ubaahanyahay macruufka 6.0 ama wixii ka dambeeya. La jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Barnaamijkan waxaa loo habeeyay iPhone 5. Waxaa lagu heli karaa luqadaha soo socda: Isbaanish, Jarmal, Shiinees fudud, Kuuriya, Faransiis, Ingiriis, Talyaani, Jabbaan.